Nehemia : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Nehemia : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 28 Mey 2019 à 11:59
128 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 8 Aprily 2018 à 15:55 (hanova)
k (Fanitsiana tsipelina sy fehezanteny)
Endrika tamin'ity 28 Mey 2019 à 11:59 ity (hanova) (esory)
[[Sary:108.Nehemiah Views the Ruins of Jerusalem's Walls.jpg|vignette|''Mahita ny sisam-paharavàn'ny mandan'i Jerosalema i Nehemia,'' nataon'i Gustave Doré, taona 1866.]]
I '''Nehemia''' dia [[Jiosy]] niasa tao amin'ny lapan'ny mpanjaka tao Sosa (na Soza na [[Sosana]]) renivohitry ny Fanjakana persiana tamin’ny nanjakan’i [[Artakserksesy]] I (taona 465 – 424 tal. J.K.). Lohandohany teo amin’ny fiarahamonina jiosy tamin’ny taonjato faha-5 tal. J.K izy. Izy no mpikarakara ny zava-pisotron’ny mpanjaka sady olona nitokisan’ny mpanjaka persiana Artakserksesy I izay nanjaka teo anelanelan’ny taona 464 sy 424 tal. J.K.
Na dia nateraka tany an-tsesitany aza i Nehemia dia niraiki-po tamin’i Jerosalema. Rehefa tonga tao Sosa i Hanania, izay mety ho rahalahiny, dia nitantara ny zava-misy any Jerosalema, ka nalahelo tamin’ny fahasahiranana nahazo ny mponin’i Jerosalema i Nehemia. Ny fanamboarany ny tanàna sy ny fanavaozana izay nimasoany no tantaraina ao amin’ny boky mitondra ny anarany, dia ny [[Bokin'i Nehemia|Bokin’i Nehemia]], izany.
=== Fikendrena politika ===
[[Sary:Неемия.jpg|vignette|''Manangana indray ny mandan'i Jerosalema i Nehemia.'']]
Nanao izay hampahaleo tena an'i Jerosalema i Nehemia ka nezahiny natsagana ny manda manodidina ny tanàna. Niara-nisalahy tamin’izany fananganana izany i Nehemia sy ny mpitondra fiangonana ary ny mpisoron-dehibe [[Eliasiba]] izay nitarika ny hetsika nohatevenin’ireo mpahay asan-tanana rehetra. Ny loholona ihany no tsy nanaiky an’izany.
Tsy nahafaly an’i Sanbala governoran’i [[Samaria]] sy an’i Tobia governeran’ny [[Amona (fanjakana)|Amonita]] ary an’i Gehema [[Arabo (olona)|arabo]] ny fahatongavan'i Nehemia, indrindra ny fikasany hanamboatra ny manda. Noho izany dia nanao teti-dratsy hanoherana an’i Nehemia izy ireo. Noharatsin’ireo fahavalony tany amin’ny mpanjaka i Nehemia sady nisy nanimba ny manda. Nisy koa ny Jiosy mpomba ireo mpanohitra an’i Nehemia ireo. Nampitanin’i Nehemia fiadiana ny mpiasana sady nanendry mpiambina izy ka voatsangana ny manda tao anatin’ny roa amby dimampolo andro.
Efa nisy ny fanamboarana ny manda talohan’izany nefa tsy nahomby. Nanao izay hahamaro ny mponina jiosy tao Jerosalema avy eo i Nehemia mba hampisy lanjany indray ny tanàna masina.
=== Fanarenana ara-tsosialy ===
Nanao fanarenana ara-tsosialy koa i Nehemia. Nampihatra ny lalàna ara-pivavahana ao amin’ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Deoteronomia]] i Nehemia noho ny fanararaotana ny mahantra. Nampanaoviny fianianana teo anatrehan’Andriamanitra ireo mpampitrosa mba hamela ny trosan’ny tsy manana mbamin’ny [[zanabola]] sy ny zavatra natao antoka. Nanao izany izy satria niteraka fahasahiranana ny haratsian’ny vokatry ny fambolena tamin’ny 440 tal. J.K. : ny malahelo tsy nanam-bola intsony handoavany ny hetra amin’ny mpanjaka; ny fitrosana sy ny fanaovana antoka fananana tamin’ireo Jiosy nanan-karena avy any Babilona dia navesatra dia navesatra tokoa. Nisy ny Jiosy tsy faly tamin’izany rehetra izany ka nikasa ny hamono an'i Nehemia, isan’izany ny mpaminany [[Semaia]] sy ny mpaminany vavy Noadia.
=== Fanarenana ara-pivavahana ===
Raha ny amin’ny asa faharoa indray (taona 430 – 428 angamba izany), i Nehemia (toko faha-13.4) dia nandray fepetra maromaro: nisy Amonita nonina tao amin’ny kianjan’ny [[Tempolin'i Jerosalema|Tempoly]] izay nesorina avy ao ho fampiharana ny voalazan’ny [[Bokin'ny Deoteronomia|Bokin’ny Deoteronomia]] hoe: "Ny [[Moabita]] sy ny [[Amonita]] dia tsy manana anjara ao amin’ny fiangonan’Andriamanitra." Nesorina tsy ho ao an-tanàna ireo izay tsy Jiosy. Nanampy an’i [[Ezra]] (na Esdrasa) tamin’ny fampiharana ny [[Torah|lalàn’i Mosesy]] i Nehemia. Nisy ny fakàna hetra hanomezana ny fiveloman’ny [[Levita]] mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ny asa ao amin’ny tampoly. Tsy maintsy nohajaina ny fialan-tsasatra amin’ny andro sabata ary ny fanambadiana olona hafa firenena dia tsy azo natao.
Taorian’izany rehetra izany dia niverina tany Sosa i Nehemia nefa nisy fotoana nodiany indray tany Jerosalema ka tao no mety nahafatesany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/971032"